Glibc 2.30: kuburitswa kutsva kweC raibhurari | Linux Vakapindwa muropa
Kune avo vasati vazviziva, iyo Glibc raibhurari (GNU Raibhurari C) raibhurari yakajairika kwazvo inoshandiswa panguva yekumhanya yesoftware yakanyorwa mumutauro weC. Iyi projekti yeGNU iri pasi peLGPL rezinesi uye inopa masystem akateedzana eemaitiro esystem (syscalls) uye mamwe mabasa akakosha anotsanangurwa mairi. Anenge mapurogiramu ese ari muC programming mutauro anoshandisa iwo (kusanganisira kernel pachayo).
Inowanikwa kune GNU masisitimu zvichibva paLinux kernel, kunyange ichinyatso kutakurika kutsigira akasiyana masisitimu uye akawanda akasiyana Hardware. Mamwe masisitimu akaita saKaiku, BeOS uye Debian GNU ine Hurd kernel, kFreeBSD inotsigirwa neraibhurari yakakosha iyi. Kana iwe ukatsvaga yako distro, iwe uchaiwana se libc mune imwe yeshanduro dzayo.
Zvakanaka, kana yangounzwa, iwe unofanirwa kuziva kuti izvozvi zvakatangwa glibc 2.30 vhezheni ine inonakidza kuvandudza. Kutevera kuburitswa kweiyo GNU C Raibhurari 2.30 chirongwa, optimizations uye zvitsva maficha zvinobva kutsigiro ye Unicode 12.1 kune zvimwe zvisingakoshi zvinowedzera. Inotarisisa zvakare rutsigiro rwe- kurodha pasi bundle yeiyo inosimba linker yekutakura zvinhu zvakagovaniswa seimwe nzira kune iyo LD_RELOAD nharaunda inoshanduka.
Kunze kwaizvozvo, ine zvitsva muLinux senge getgents64 (), gettid (), uye tgkill (). Nezve rutsigiro rwakasarudzika rwePOSIX, kune zvimwewo zvinhu zvitsva zvine mabasa akadai septhread_cond_clockwait, pthread_mutex_clocklock, pthread_rwlock_clockrdlock, pthread_rwlock_clockwrlock uye sem_clockwait. Kuita kwakatogadzirisirwa dhizaini yeARM uye zvakare yakanangana nemaARM mapurosesa akagadzirirwa HPC inonzi ThunderX2, mamwe mabugs ekuchengetedza, nezvimwe.
Ndinovimba yeiyo inotevera vhezheni izvozvi mukuvandudza, 2.31, Ini ndinogona kukuudza nezve dzimwe dzakawanda nhau muLxA ... Izvo zvicharongerwa Kukadzi 2020, saka kuchine mwedzi mishoma yekuona mhedzisiro yekusimudzira.
Kuti uwane rumwe ruzivo - Saiti yeprojekti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Glibc 2.30: kuburitswa kutsva kweC raibhurari
LD_RELOAD? Ndinovimba yaive typo.
Xfce 4.14 yechitatu yekutarisa vhezheni yakaburitswa nezvakasiyana zvigadziriso